Dib u eegista Spiritum - Akhriska maskaxda ee internetka
Akhrinta maskaxda internetka > Dib u Eegista Rumaha
Markuu ruuxu kugu dhaqaajiyo inaad raadsato hagitaan ku hagidda jidkaaga runta ah, cilmu-nafsi ahaan aan horay loo arag Ruux waxay diyaar u yihiin inay ku hagaan. Shabakaddan cilmi nafsiga ee adduunka ayaa si adag u qaadatay booskeeda sida kaydka kaa caawin kara inaad isku xidho (luqaddaada hooyo) iyo cilmi-nafsi caalami ahaan loo ixtiraamo.
Waxaad dhihi kartaa Ruuxaayihiisa waa la sii qorsheeyay. Shirkaddeeda waalidka ah, Eso.tv, waxay soo saartaa barnaamijyo TV-ga maskaxda oo laga sii daayo 14 waddan oo si xamaasad leh ay u daawadaan boqolaal kun oo daawadayaal ah. Natiija ahaan, waxaad ka filan kartaa heerarka ugu sarreeya ee xaqiiqda, saxnaanta iyo fahamka akhriskaaga.
Ma u baahan tahay caddeyn? Fiiri noocyadooda kala duwan ee maskaxda. Ruux sawir gacmeedyada oo si taxaddar leh u kaxeeya maskaxda ugu fiican waddan kasta si ay u bixiyaan hagis iyo talo tayo sare leh, oo si gaar ah loogu talagalay qof kasta oo doonaya.
Maskiil kastaa wuxuu si adag u xifdiyey dhaqamada qadiimka ah sida akhrinta kaararka tarot, numerology iyo astrology iyo / ama wuxuu leeyahay hibo leh karti iyo karti. Mid walbana si joogto ah ayaa loola socdaa si loo hubiyo in ay u adeegsanayaan hadiyado la dhaxlo oo mas'uul ah si loogu hago kuwa doonaya hannaankooda nololeed. Wadajir ahaan, waxay matalaan awoodo badan oo kala duwan, ooy kujiraan hagitaan ruuxi ah, akhrinta tamarta, falanqaynta riyada, aqrinta orodka, kanaalista, iyo inbadan.
Waana wax fudud in la isku xidho! Boggan waxaa loogu talagalay inay kugu sasabasho laakiin aan kugu buuxin badhanno deg-deg ah oo fudud oo kuu saamaxaya inaad doorato cilmi nafsi, wadahadal bilaash ah kula sheekaysiga fiidiyaha, ama aad ku iibsato dhibco ku saabsan akhriska gaarka ah. Haddii aad doorato ikhtiyaarka xorta ah ee hadalka, waad sii wadan kartaa adoo si dhakhso leh u dhajinaya sanduuqa fiidiyaha, kaasoo si isdaba joog ah u soo bandhigaya fiidiyow la doortay oo maskaxeed. Ama waxaad gujin kartaa mid kasta oo ka mid ah faylalka muujinaya bar-kulan caan ah oo ah “Free Chat Now”.
Markaa waad ka qaybqaadan kartaa cilmi nafsiga aad dooratay adoo weydiinaya su'aal kasta oo gubanaysa maskaxdaada. Miyaad la kulantay wehelka aad nolosha la leedahay ee aad la joogi karto ama miyaad siin kartaa isaga ama iyada aasaaska guriga? Guul xirfadeed iyo barwaaqo miyey kugu sugayaan gees sax ah? Qof aad jeceshahay runti ma joogayaa meel ka fiican? Ma riyada cad ee aad xalay seexatay macnaheedu waa yaab lama filaan ah oo aad muddo dheer sugeysay ayaa ku soo socda?
Ruux cilmi nafsiyeedka ayaa si gaar ah shakhsiyan u siiya talo iyo hagitaan adiga iyo nolosha aad ku aragtid. Adigoo baaraya astaamaha maskaxda, waxaad si cad u aqoonsan kartaa kuwa adiga kugu habboon adiga oo aad u gaartaa go'aanka ugu badan. Waxaa jira wax badan oo kaa caawin kara adiga; profiles waa qalab dhameystiran oo muujinaya, khibrad, karti, qaab aqrin, luqadaha lagu hadlo, qiimeeynta, maragfurka, xitaa bio gaagaaban. Marka lagu daro gunno dheeri ah, waxaad ogaan kartaa inta qof ee kale ay diyaar u ahaayeen caawimaadda cilmi nafsiga ee aad ka fiirsaneyso oo aad eegto qiimeyntooda hadda.
Sida goob cusub, Ruux wali wuxuu ku jiraa qaabkiisa kobaca. Tusaale ahaan, ma jiraan shaashado shaandhayn oo wax yar halkan lagu sharraxay; ahmiyada si cad ugu jirtaa maskaxda. Waxay qaadataa socod yar in lagu gaaro qaybta Su'aalaha Weydiimaha, ee ku qarsoon hoosta "Caawimaad" ee hoosta bogga. Waxaan si xoogan u tuhunsanahay in astaamo dheeri ah iyo marin habaabin lagu soo dari doono iyadoo bulshada ay sii wadayaan.
Hadana, waxa jira waxyaabo badan oo badan oo taasi ah Ruux ayaa saxaysa. Haddii aad ku cusub tahay bogga, waxaad la sheekaysan kartaa qof maskaxda ka xanaaqsan oo loo calaamadeeyay "hadda waxaa lagu heli karaa Wadahadal Bilaash ah" illaa 10 daqiiqo oo bilaash ah. Wadahadalkaas bilaashka ah waxaa loola jeedaa in lagu qanciyo waana; maalgashi looma baahna si looga faa'iideysto adeegyada Spiritum.
Ruux ayaa lasiiyay dalabyo hordhac ah… yaase eedayn kara? Marka si fudud kama fiicnaato "bilaash." Markii aad naftaada ku qanacdo in maskaxdaadu fahamto baahiyahaaga iyo xaaladaada, waxaad iibsan kartaa dhibco, Waxaad markaa ku lug yeelan kartaa wada sheekaysiga fiidiyaha ee labada dhinac ee gaarka loo leeyahay ama waxaad ku xidhi kartaa farriin ama taleefan ama taleefan. … Doorashadaada. Maskax kastaa wuxuu dejiyaa qiimihiisa / keeda, laga bilaabo 99 ¢ daqiiqad oo ku saleysan si ku saleysan awoodaha khibradeed. Adiga ayey kugu eg tahay go'aaminta dhererka akhriskaaga; habkaas waxaad ku ogaan doontaa inaad hore u ogaato waxa akhrintaadu ku kici doonto iyada oo aan wax la yaab ah lagaa qabin.
Sidaad ka filan karto shirkad ay leedahay shirkadda Eos.tv, Ruux waxaa ka go’an inay dhammaystirto qancin. Haddii aadan si buuxda ugu faraxsanayn aqrintaada, waxaad heli doontaa aqrin kale oo bilaash ah oo ka socda mujtamac kasta oo ka tirsan bulshada dhexdeeda.
Qadka hoose: Ruux waxay u taagan tahay qiimo fiican. Malaha ma jiro shabakad kale oo maskaxda ka shaqeysa oo maanta ku deeqeysa luqado badan oo luqado kala duwan ka soo baxda maskaxda ugu wanaagsan ee dalal badan. Markaad ku darto wadahadalka hordhaca ah ee halista ah, ma jiraan wax khasaare ah oo ka soo baxa baarista maskaxdan hibada leh. Iyo laga yaabee, mustaqbal ifaya oo cusub oo cusub oo lagu kasban karo.